Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၁) | CosmeticMyanmar
Home » Article » Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၁)
ဟေ့ မျက်နှာအဆီမပြန်စေဖို့ထိန်းပေးတဲ့ Translucent Powder လေးတွေက မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းဖို့တင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားနေရာတွေမှာလည်းအသုံးတည့်တယ်ဆိုတာကို သိပြီးကြပြီလား? မသိသေးတဲ့ ပျိုတို့အတွက် အောက်မှာဖော်ပြပေးမှာမို့ ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လေ။
နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တောက်တောက်တွေဆိုးတဲ့အခါမှာ ဘေးလိုင်းလေးတွေနဲ့အရောင်တောက်တာကို ကြာရှည်ခံနေအောင် translucent powder တွေကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့အပေါ်ကို tissue ခံပြီး အဲဒီ tissue ပေါ်ကို brush အမွှေးပွတစ်ချောင်းနဲ့ powder လေးတွေလိမ်းပေးလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် နှုတ်ခမ်းနီအပေါ်ကနေ တစ်ထပ်ထပ်ဆိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကြာရှည်ခံပြီးအရောင်စွဲတဲ့ နှုတ်ခမ်းအရောင်တောက်တောက်လေးကိုရနိုင်ပါပြီ။
တစ်ခါတစ်လေ ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ accessories ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အသားတွေပွန်းတဲ့အခါမှာ baby powder အစား translucent powder လေးလူးပေးပြီးတော့လည်းသက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
နွေရာသီလိုအရမ်းပူအိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆံပင်တွေခဏခဏအဆီပြန်လို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊ ဆံပင်အရင်းနားကို translucent powder ကို brush နဲ့ လိမ်းပေးပြီး ဆံပင်ကိုလှန်ပြီးဖြီးလိုက်ရင် powder မှုန့်တွေလည်းမကပ်နေတော့သလို ဆံပင်လည်းအဆီပြန်နေတယ်လို့မထင်ရစေတော့ပါဘူး။